Booliiska Kenya oo dilay labo xubnood oo al-Shabaab looga shaki qabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBooliiska Kenya oo dilay labo xubnood oo al-Shabaab looga shaki qabo
July 22, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Labada nin ee al-Shabaab looga shaki qabo.
Nairobi-(Puntland Mirror) Booliiska dalka Kenya ee magaalo xeebeedka Mombasa ayaa shalay oo Khamiis ahayd toogtay dilayna labo nin oo ay sheegeen in la doon-doonayay kuwaasoo katirsanaa kooxda al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaal sare.
Labada nin, oo la raadinayay muddo labo bilood ah ayaa la dilay kadib markii booliiska ay howlgal ku qaadeen meel ay ku dhuumanayeen oo ku taala deegaanka Mishomoroni ee magaalada Mombasa, taliye ku-xigeenka deegaanka, Walter Abondo ayaa sheegay in nin kale uu baxsaday.
“Waxaanu ogaanay dhimashada kuwa laga shakisanyahay… labada nin waxaa lala xiriirinayaa ficilo argagixiso oo ka dhacay Malinda iyo Lamu, ayuu Walter Abondo u sheegay saxaafada, isagoo xusay in waqooyiga Mombasa ay goobjoog u noqotay weeraro ayna ku xoogaysteen ficilo lala xiriirinayo al-Shabaab.
Booliiska ayaa ka helay bumbooyin, rasaas, walxaha qarxa iyo cajilado CD-ah meeshii ay nimankaas ku dhuumanayeen.
Kooxda al-Shabaab ayaa sheegtay weeraradii ugu dambeeyay oo ay ka geysteen gudaha Kenya in ay uga aar-gudayaan ciidamada Kenya oo gudaha Soomaaliya loo diray sanadkii 2011-ka, halkaas oo ay ku la dagaalamayaan maleeshiyada al-Shabaab, iyagoo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta afrika.